Sidee loo ogaadaa haddii laygu xannibay WhatsApp? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo ogaadaa inay igu xannibteen WhatsApp?
Waxaa laga yaabaa 1, 2021 0 comments 386
Codsiga farriinta deg dega ah ee caanka ah ee WhatsApp maalin kasta waxay u noqotaa aalad aan looga maarmin adeegsadayaasha, wax badan oo ka mid ah xilliyadan oo ah in wanaaggu qayb ka noqday nolol maalmeedka.
Taasi waa sababta dadka isticmaala maalin kasta uga walwalaan inay si qoto dheer u ogaadaan waxqabadka barnaamijka WhatsApp, si ay ugu xirnaadaan inta ugu badan ee suurtogalka ah iyo inay awood u yeeshaan inay la falgalaan isticmaaleyaasha kale.
Maxay tahay sababta loo ogaado haddii laygu xanibay WhatsApp.
WhatsApp, Sida oo dhan shabakada bulshada Waxay tusineysaa in isdhexgalka adeegsadayaashu ay ku saleysan yihiin baahida loo qabo in midba midka kale ogaado oo uu helo helitaanka macluumaadka la xiriira mid kasta oo iyaga ka mid ah. Codsigan wuxuu leeyahay habab kala duwan oo loo sameeyo sida daabacaadda xaaladda, sawirrada muuqaalka, iyo xitaa nooca Ganacsi wuxuu u oggolaanayaa daabacaadda buugaagta adeegyada iyo alaabada.
Mid ka mid ah siyaabaha ay isticmaaleyaashu u joojiyaan isdhexgalka ay la leeyihiin kuwa adeegsadayaasha ah ee iyagu aysan xiiseyneynin inay sii wadaan xiriirka, ayaa ah xannibida xiriirkaaga Codsiga WhatsApp. Xulashadani waxay kicineysaa shaki badan oo adeegsadayaal badan oo doonaya inay ogaadaan sida loo aqoonsado in la xannibay.
Sida loo aqoonsado xannibaadda WhatsApp
Waxaa jira siyaabo badan oo loo maro xaddid helitaanka macluumaadka dadweynaha ee WhatsApp, waxaa lagu sameeyaa ikhtiyaariyada asturnaanta iyo amniga. Tusaale ahaan, haddii aanad ilaalin karin waqtiga isku xidhka ugu dambeeya ee isticmaalaha, waxay u badan tahay inuu xiran yahay, ama in isticmaaleha uu habeeyay waqtigiisii ​​ugu dambeeyay aan la arki karin.
Haddii aadan arki karin haddii aad khadka tooska ah ku jirto marka aad furanayso wada hadalka aad la leedahay isticmaale khaas ah, sidoo kale waxay u badan tahay inuu isticmaalehan Waan xanibay. Sidoo kale, haddii aadan arki karin xaaladdaada, waxay u badan tahay inay xannibeen xiriiriyahaaga.
In kasta oo waxyaabahan aan soo sheegnay aysan macnaheedu ahayn tan xayiran WhatsAppHaddii nambarkaaga xiriiriyaha laga tirtiro aaladda moobaylka isticmaaleha, oo isticmaalaha uu u qaabeeyey in xaaladdooda, waqtigooda ugu dambeeya iyo sawirkooda astaanta ay u muuqdaan oo keliya dadka ay la xiriiraan, ma arki doontid
Dhinacyada sheeganaya in la xanibay.
Waxaa jira siyaabo aan shaki lahayn oo lagu ogaan karo haddii xiriirkiinu uu ahaa xayiran WhatsApp. Mid ka mid ah kuwan ayaa ah awood la'aanta in la sameeyo wicitaan ama fiidiyow ah oo loo adeegsado isticmaaleha su'aasha, taas oo muujineysa in la xanibay.
Intaas waxaa sii dheer, dhammaan fariimaha loo diray xiriiriyaha leh xayiran WhatsApp waxaa ku haray hal shil, oo tilmaamaya in fariinta la diray, laakiin waligood ma tagayaan gobolka calaamada labaad, taas oo muujineysa in fariinta la gudbiyay.
Waa in lagu xisaabtamo in xaaladahan ay dhici karaan marka isticmaalaha fariinta loo diro WhatsApp uusan lahayn xiriir internet ah, hase yeeshe waqti macquul ah ayaa dhaafay welina lama sameyn karo tallaabooyinkan adeegsadaha la sheegayo, taasoo muujineysa in xiriirkooda uu ahaa qufulan.
1 Maxay tahay sababta loo ogaado haddii laygu xanibay WhatsApp.
2 Sida loo aqoonsado xannibaadda WhatsApp
3 Dhinacyada sheeganaya in la xanibay.
Sidee looga jawaab celiyaa fariin gaar ah oo Instagram ah?
Sidee loo ogaadaa haddii isticmaale i xannibay Instagram?